दुर्घटनामा ३ वटा गाडी ठोक्किँदा हावामा उड्यो एउटा कार: भाग्यमानी ड्राइभर यसरी फुत्त झरे (भिडियो)
जेठ ०८, २०७५ BNNTV
एजेन्सी । युक्रेनमा एउटा डरलाग्दो सडक दुर्घटनामा एउटा गाडी दुई वटा कारसँग ठोकिंदा भकुण्डो जस्तै गरी ठक्कर खाने गाडी हावामा फन्को खाँदै भुईमा झर्न पुग्छ। तर, त्यति ठूलो दर्घटनाबाट पनि भाग्यमानी ड्राइभर अच्चमले बच्छन्।
उक्त दुर्घटना सडकमा भएको सीसीटीभी क्यामरामा कैद भएको छ । जुन हेर्दा नै आङ सिरिङ्ग हुन्छ। यो घटना युक्रेनको कोलोमिया भन्ने ठाउँमा घटेको हो।
सडकमा लगाईएको सीसीटीभीको फूटेजमा कैद भएको भिडियोमा एउटा चौबाटोमा एउटा कार निकै तिब्र गतिमा आउँछ र अर्को तर्फबाट आएको एउटा गाडीलाई ठक्कर दिन्छ। ठाक्कर दिने गाडी बत्ताउँदै केहि पर गएर रोकिन्छ। तर, ठक्कर खाएको गाडी भने चौबाटोमा क्रस गर्न रोकी राखेको अर्को गाडीमा ठोक्किएर एक छिन हावामा उड्छ र यत्तिकैमा उक्त गाडीको झ्यालको सिसा फुट्छ अनि ड्राइभर त्यहाँबाट फुत्त झर्छन् र भाग्न सफल हुन्छन्।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०८, २०७५१३:३४
सिकागोमा गोली चल्दा ५ को मृत्यु, दर्जनौ घाइते
यस देशमा लागु भयो यौन हिँसा सम्बन्धी यस्तो कानुन!
अष्ट्रेलियामा प्रेमिकाको हत्या गरेपछि नेपाली प्रेमीले गरे आत्महत्या !
७० प्रतिशत ‘सामुद्रिक माछा’मा प्लाष्टिक : यस्तो छ एक अध्ययनको रिपोर्ट
पोर्नस्टार मिया मल्कोवालाई लिएर जोशमा आए राम गोपाल वर्मा, गरे यस्तो घोषणा